Nhicha Motor, Ọkara nhicha Motor, Washer Motor - Shandong Better Motor
Anyị na-enye ndị kacha mma na ngwaahịa na ngwaahịa
Shandong Better Motor Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepe emepe, n'ichepụta
na ire AC usoro moto na DC na-adịgide adịgide magnet moto.
E nwere ihe ndị ọzọkarịa ụdị 20 dị iche iche, ọtụtụ narị nkọwa.
Eghigh nsogbu washer moto,ikuku Compressor moto na igwe na-arụ ọrụ igwe na wdg.
Mma ụzọ emepụta AC usoro moto eji akwa nsogbu washer na China,wa na-ahuta ya
ihe na-eduga n'ụdị igwe igwe na-asacha.
Mma na-elekwasị anya na-emepe emepe AC usoro moto na DC na-adịgide adịgide magnet moto ruo ogologo oge
kemgbe o bidoro.Ndebanye aha edenyere ”BTMEAC” ka amatara nke otutu ulo oru ama ama ha niile n'ụwa niile
Series gburugburu Bevel Right n'akuku Gear Reducer Motor
Motor N'ihi Chainsaw ígwè (HC20230B)
HC76 usoro maka nnukwu nsogbu washer (HC7625/30/40)
Tumadi na-elekwasị anya na usoro 3 nke motọ: Mkpụrụ moto otu (moto zuru ụwa ọnụ), DC na-arụ ọrụ magnet na-adịgide adịgide, yana otu obere asynchronous moto, nke karịrị ụdị 20 na ọtụtụ narị nkọwa gụnyere igwe nrụgide dị elu, igwe na-arụ ọrụ igwe, ikuku ikuku. moto, igwe ihe eji eme ihe n’igwe na moto ya.
Better Motor (BTMEAC) nwere ọkachamara ọrụaka ọrụ, nke mejupụtara 21 engineer na agadi utu aha na eletriki igwe ụlọ ọrụ akpaaka na akụkụ ndị ọzọ. Kwa afọ, ụlọ ọrụ ahụ na-azụlite ihe karịrị 20 ngwaahịa ọhụrụ ma na-echepụta ihe karịrị 300 ngwaahịa ọhụrụ.
Advanced mmepụta ụlọ ọrụ dị ka ntụmadị pịa, asọfe igwe, arụmọrụ ule igwe wdg si USA, Switzerland, Japan, na-anụ ụlọ Jinminjiang akpaka asọfe igwe.
Shandong Better Motor Co., Ltd. Ọrụ